First place, Ji Hyeon-woo and Yoo In-na's 'tip-toe kiss'
မကြာမှီ ကပြ သွာတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေမှာ kiss ခန်းတွေမှ 'best kiss' တွေကို online မဲပေး စနစ်နဲ့ ပရိသတ် ထံမှ ဆန္ဒ ကို Ium ဆိုတဲ့ dating service ကုမ္ပဏီ ကကောက် ခံခဲ့ ပါတယ်။
အသက် ၂၀-၃၀ အတွင်းရှိ အမျိုးသမီး အမျိုသား ၁၀၈၃ ဦးထံမှ ဆန္ဒ ယူခဲ့ ရာမှာ Queen In-hyun's Man ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ မင်းသား Ji Hyeon-woo နဲ့ မင်းသမီး Yoo In-na တို့ရဲ့ အနမ်း က 39% နဲ့ ပထမ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအနမ်း ကို tip toe kiss လို့အမည် ပေးထား ကြပါတယ်။
Second place, Kim Ha-neul and Jang Dong-gun's 'cherry blossom kiss'
A Gentleman's Dignity ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ မင်းသား Jang Dong-gun နဲ့ မင်းသမီး Kim Ha-neul တို့ရဲ့ အနမ်း က 25% နဲ့ ဒုတိယ နေရာကို ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအနမ်း ကို cherry blossom kiss လို့အမည် ပေးထား ကြပါတယ်။
Third place, Han Ji-min and Micky Yoochun's 'teary kiss'
The Rooftop Prince ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ မင်းသား Micky Yoochun နဲ့ မင်းသမီး Han Ji-min တို့ရဲ့ အနမ်း က 20% နဲ့ တတိယ နေရာကို ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအနမ်း ကို teary kiss လို့အမည် ပေးထား ကြပါတယ်။
Forth place, Ha Ji-won and Lee Seung-gi's 'refrigerator kiss'
The King2Hearts ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ မင်းသား Lee Seung-gi နဲ့ မင်းသမီး Ha Ji-won တို့ရဲ့ အနမ်း က 16% နဲ့ အမှတ်လေး နေရာကို ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအနမ်း ကို refrigerator kiss လို့အမည် ပေးထား ကြပါတယ်။
အင်း .... ကြံကြံ ဖန်ဖန် လည်းလုပ်တတ် ကြပါ ပေတယ်။
Source Link : The Perfect Kiss Chosen By Single Women And Men
Summary - The recent 'tip-toe kiss' by Ji Hyeon-woo and Yoo In-na in the tvN drama Queen In-hyun's Man was chosen as the best kiss by single men and women in their 20~30s.Dating service Ium carried outasurvey of 1083 men and women in their 20~30s in celebration of "Kiss Day" on the 14th of June. The result of the 'best kiss' was Yoo In-na and Ji Hyeon-woo's 'tip-toe' kiss with result of 39% (422). Promotions manager Kim Mi-kyeong of Ium said, "The reason for the 'tip-toe kiss' being the best might be because of the recent love confession which bought the envy and jealousy of all women and men in their 20~30s". This survey was conducted from the 7th to the 13th on the Ium blog (www.iumsin.com) withatotal of 1083 women and men participating. Ium is the number one social dating website that introduces one person everyday at 12:30.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/529/the-perfect-kiss-chosen-by-single-women-and-men
Yeon Jeong-hoon Has A Curfew And A Strict Wife In Han Ga-in
Posted By - Ko Ko - August 6, 2012
ကျွန်တော့ မိန်းမက ကျွန်တော့ကို ည ၁၂ နာရီ နေက်ပိုင်း အိမ်ပြင် ထွက်ခွင့် မပေးပါ။ ညမထွက် ရ carfew ထုတ်ထား ပါတယ်။ လို့ မင်းသမီး Han Ga-in ရဲ့ ခင်ပွန်း မင်းသား Yeon Jeong-hoonကမကြာမှီကပြောသွားပါတယ်။
Actress Han Ga-in
ဒီအကြောင်း ကို TV Talk Show တစ်ခုမှာ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ည ၁၂ နာရီကျော် မှ အိမ်ပြန် လာရင် သူမကို ထိခွင့် ကိုင်ခွင့် မပြုတော့ ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ မရ ရအောင် ချော့မော့ ပြီး ထိကိုင်ခွင့် ရအောင် လုပ်ပါ တော့တယ် လို့ ဟာသ နှော်ပြီး ပြောသွား ပါတယ်။
Her recent TV drama "Sun and Moon"
၂၀၁၃ ထဲမှာ သားသမီး ယူတော့မယ် လို့လည်း ပြောသွား ပါတယ်။ ထို့ပြင် အိမ်ထောင်သက် ၇ နှစ်ကျော်မှာ အသေး အဖွဲ ကလွဲလို့ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှု လည်းပဲ မရှိခဲ့ ဘူးပါလို့ မင်းသား က ပြောသွား ပါတယ်။
Summary - Actor Yeon Jeong-hoon, the spouse of actress Han Ga-in has divulged information about the couple's marriage recently on an episode of Channel A's talk show "Shocking". On the show that aired on June 13, Yeon said that his curfew, designated by himself and his wife, was 12 a.m. "If I'm home later than that, she won't let me touch her", said Yeon who claimed that he wasa"big physical affection person". Yeon said despite the punishment follows his late nights that he normally would keep trying to touch her, generating much laugh from audience in the studio. "Asacouple, we are very affectionate and it's kind of cute that she uses that against me", said Yeon.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/527/yeon-jeong-hoon-has-a-curfew-and-a-strict-wife-in-han-ga-in
Knockout Actress Wins Boxing Tourney
မင်းသမီး Lee Si Young (30) ဟာ Yeongju, North Gyeonsang မှာ ကျင်းတဲ့ 33rd Annual Amateur Boxing ပြိုင်ပွဲ မှာ ပြိုင်ဖက် Ji Yoo-jin (မနှစ်က ချန်ပီယံ) ကို အနိုင်ယူ ပြီး ချန်ပီယံ ဆုကို ရရှိ သွားပါတယ်။ 48-kilogram (105-pound) တန်းမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၆ ရက် နေ့က စတင် ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲ တွေမှာ တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ ဆက်တိုက် အနိုင် ရလာတဲ့ မင်းသမီးကို အများက စိတ်ဝင် စားစွာ စောင့်ကြည့် လာခဲ့ကြ ပါတယ်။
Actress Lee Si Young
Lee Si Young ဟာ March 2011 ကလည်း (၇) ကြိမ်မြောက် ကိုးရီယား National Amateur Championships ရဲ့ ချန်ပီယံ ဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ ပါသေးတယ်။
ထိုစဉ်က ချန်ပီယံ ဆုကို ဆွတ်ခူး ပြလိုက် ခြင်းဖြင့် ၄င်းရဲ့ fans များနဲ့ media လောကကို တုန်လှူပ် သွားစေ ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာ မင်းသမီးဟာ လက်ဝှေ့ ဝါသနာ ပါသွားပြီး ဆက်လက် လေ့ကျင့် ရာက ယခု ကဲ့သို့ champion ဆုတွေကို ဆက်တိုက် ရရှိတဲ့ အထိ တိုးတက် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source Link : Knockout Actress Wins Boxing Tourney
Summary - Actress Lee Si-yeong has claimed first place at the 33rd annual amateur boxing contest, which took place in Yeongju, North Gyeonsang, yesterday morning. Lee, who boxes in her spare time, took out her opponent in the women's 48-kilogram (105-pound) segment withascore of 10 to 7. Lee's agency said that the actress complained of shoulder pain during the match, but she fought through it to win. Lee's opponent Yoo-jin was last year's winner of the national women's boxing competition. From early this month, all eyes had been on Lee as she won one match after another beginning with the Seoul City Amateur Boxing Competition held at Korea National Sport University on July 6. While filming the various, Lee trained professionally and has pursued the sport. In 2010, Lee Won the Seventh Annual Women's Amateur Boxing Competition. With one more feat under her belt, Lee said that she'll be taking time off from boxing to focus on her acting career.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/526/knockout-actress-wins-boxing-tourney
Koo Hye-seon To Screen Her 3-D Short
Posted By - Ko Ko - August 5, 2012
F4 မင်းသမီး Koo Hye-seon သည် ၄င်းကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးသေား Fragments of Sweet Memories အမည်ရှိ သုံးဖက်မြင် 3D ရုပ်ရှင်ကား ကို Aug 10 မှ 12 အထိ ကျင်းပမည့် 8th Jechon International Music & Film Festival တွင်ပြသ ရန်စီစဉ် နေပါသည်။
၄င်းကားတွင် Yoo Seung-ho မှ သရုပ်ဆောင် ပါမည်။ ဇာတ်ညွှန်းနှင့် ဇာတ်ဝင် သီချင်း ကိုလည်း မင်းသမီး ကိုယ်တိုင် ရေးသည်ဟု သိရ ပါသည်။
မနှစ် ကလည်း ၄င်းပွဲတော် တွင် ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးသည့် အခြား ရုပ်ရှင် တစ်ကား တင်ဆက် ခဲ့ပါ သေးသည်။
ရုပ်ရှင် ရိုက်ရတာ အလွန် ပင်ပန်း ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြီးသွား တဲ့အခါ အလွန်မှ ပျော်စရာ ကောင်း ပါတယ်လို့ မင်းသမီး က ပြောသွား ပါတယ်။
Source Link : Koo Hye-seon To Screen Her 3-D Short
Summary - Actress Koo Hye-seon will launch her new movie ataspecial screening event at the 8th Jechon International Music & Film Festival from Aug. 10 to 12. While Koo is used to being the center of attention for her performances on television, she'll now be watched for her work as the director ofa3-D short film, "Fragments of Sweet Memories". Koo 's work is only nine minutes long and features the protagonist, by Yoo Seung-ho, reminiscing about precious moments in his life. She was not only the director but also the short feature's screenwriter as well as the singer of the theme song. During the screening of her film, Koo said that she wants to take the time to discuss her work in depth with the audience. In the Feature section, Koo 's film from last year, The Peach Tree, will be shown. She spoke about what it was like crossing over to behind the lens. "It's tiring and grueling", she said. "At times you ask yourself, 'Why am I doing this?' But movies have the ability to make you feel alive".
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/525/koo-hye-seon-to-screen-her-3-d-short
Rendering time 0.0232 sec